Ukonwaba kumbindi wesixeko
Indawo yokuhlala ilungile kwaye ifakwe ngokupheleleyo kwisitayile saseScandinavia, imihombiso yemibala efudumeleyo kunye nobugcisa bale mihla ezindongeni buyenza ibe yindawo epholileyo kwaye entle yokuhlala. Zonke izibonelelo esinazo, yenza ukuhlala kwakho kube lula kwaye kuthandeke. Indawo ikwisitrato sabahambi ngeenyawo kumbindi wesixeko, ekuqinisekisa ukufikelela ngokukhawuleza kuzo zonke iindawo zokutyela ezilungileyo, iivenkile, iindawo eziphawulwayo kunye neendawo ezidumileyo kwikomkhulu loburharha - iGabrovo.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngezinto eziluncedo - irobhothi yasekhitshini, itoaster, i mixer, umatshini wokuhlamba, isomisi, into yokusika, iiglasi, iipleyiti njalo njalo. Ngenxa yokukholeka kwenu sinako nathi
iyunithi ye-stereo ebandakanya i-tuner, i-CD drive kunye negramafoni eneevinyls.
Akusekho ndawo ekhoyo esixekweni njengale flethi. Unokufikelela kuyo yonke indawo edumileyo embindini wesixeko kwaye kwangaxeshanye imbonakalo entle yeentaba. Kumgama oziimitha ezili-100 ungafikelela kwimyuziyam yezembali, imyuziyam ye-Interactive yoshishino, iicawe ze-orthodox, iipaki kunye nezona ndawo zokutyela zasedolophini zibalaseleyo.
Ndihlala ndifumaneka ukunceda ngeengcebiso zokhenketho, ugcino lweendawo zokutyela ezilungileyo, amalungiselelo eqela lokutyelela iimyuziyam, njl.